हिन्दुराष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानको मोरङ जिल्ला कार्यसमिति गठन
शनिबार, २६ असार, २०७८, राष्ट्रिय डेली
विराटनगर, २६ असार । हिन्दुराष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान मोरङ जिल्ला कार्यसमिति गठन भएको छ ।
शनिबार एक कार्यक्रमका बिच डा. टुनराज भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्सीय कार्यसमिति गठन भएको छ । भट्टराई संयोजक रहेको कार्यसमितिमा प्रा. डा. भेषप्रसाद धमला सह–संयोजक रहेका छन् । यस्तै केशवलाल सिंह सुवाल सह–संयोजक र सदस्यमा क्रमशः शोभा पोखरेल र सुशिल रेग्मी रहेका छन् ।
अभियानका अभियन्ता नारायण प्रसाद ढकालले ७७ वटै जिल्लामा कार्यसमिति गठन गर्ने जानकारी दिए । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अभियानको उद्देश्य रहेको र यो अभियान सफल भएरै छाड्ने उनको भनाई छ । उक्त अभियानको रुक्माङ्गत कट्वाल संयोजक रहेका छन् ।